Google Pixel, kubheja kweGoogle kuita yakakwana Android | IPhone nhau
Google Pixel, kubheja kweGoogle kuita yakakwana Android
Google ichangobva kuburitsa nharembozha yekutanga yakagadzirwa neyakagadzirirwa yavo sisitimu yekushandisa. Izvi zvinoenderana nenyaya yekuti Android yaiita zvechipfambi nekusingaperi nemakambani ekugadzira uye iwo maratidziro ehunhu, nenzira imwechete iyo kusvika ikozvino, iyo Nexus renji yaigadzirwa nemakambani aripo. Mune ino mharidzo vanga vachidada kuunza Google Pixel Runhare, nhare mbozha inonongedza nzira, neinofungidzirwa yakanakisa nhare mbozha pamusika uye nehana yekurwisa yemoyo. Kana iwe uchida kusangana ne "iPhone Killer" gore rino, isu tinopa iyo Google Pixel, maficha ayo uye zvese zvainogona kuita.
Chishandiso chitsva cheGoogle chinouya nemavara matatu, sirivheri, matte nhema, uye bhuruu inopenya iyo Apple yaizodada nayo. Pakave nekufungidzirwa kune kufanana neiyo iPhone maererano nedhizaini, nenzira imwechete iyo kubvira pakaunzwa vakafara kuvhura kutsvinyira kwakawanda pakuita kweiyo iPhone. Kune rimwe divi, tinowana chishandiso chakagadzirwa neGoogle kekutanga, ichifambidzana nekubatanidzwa kukuru neGoogle Mubatsiri, Siri yaGoogle.
Isu tinotaurawo nezve kuzvimiririra, iyo Google Pixel inopa Maawa manomwe ekuzvimiririra aine 7 chete maminetsi ekuchaja, zvirinani ndizvo zvavakapa mukuratidzira.
Nezve iyo iPhone, vakomana veGoogle vatangisa system yaunogona kuendesa yako yese data kubva ku iPhone yakananga kuGoogle Pixel usingasimudze munwe, kuburikidza netambo iwe yaunogona kutamisa kubva kuIOS kuenda kuGoogle Pixel yako hapana zvishoma pane: Vatengi, mapikicha, mavhidhiyo, mimhanzi, zvinyorwa, zviitiko zvekarenda, uye mameseji. Hazvina kushata zvachose, kunyanya nekuti mashandisiro ayo makambani maviri anofanirwa kuchinja zvishandiso anoshanda zvakashata uye yakawanda yenguva iyo yaanopa matambudziko, zviripachena nekuda kweserver uye neinternet matambudziko ekubatanidza kazhinji nguva dzose.
1 Kana iyo iPhone 7 Plus, kana Samsung Galaxy S7 Edge, yakanakisa kamera
2 Google inobhejera pakubatanidzwa
3 Magadzirirwo uye Mutengo
Kana iyo iPhone 7 Plus, kana Samsung Galaxy S7 Edge, yakanakisa kamera
Izvo zvaziviswa, DXoMark inyanzvi nyanzvi mune iyi mhando yekuongorora uye akaona zvakakodzera kupa kamera yekumashure yeGoogle Pixel (13MP) asingasviki makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, zvibodzwa zvisati zvambowanikwa nenhare mbozha kameral, iyo mukushaikwa kwekuongororwa kweiyo iPhone 7 Plus, inoita iyo Google Pixel kamera mutungamiri wemafoni emamera pamusika. Icho chinhu icho vakomana paGoogle vanga vaine zvakawanda zvekuita nazvo, zvichijekesa kuti vane yakanakisa kamera pamusika, ine optical kugadzikana, mukana wekutora mafoto mune anoyevedza kuputika, ipfupi kutora nguva pamusika uye , pamusoro pezvose, HDR + tekinoroji.
Google inobhejera pakubatanidzwa
Chikwata cheGoogle chaona chakakodzera kuti chijekese kuti ndicho chikuru kwazvo-software yemuchato yavakamboita, uye zvinoita sekudaro. Google Allo neGoogle Duo zvakanyatsobatanidzwa muhurongwa, asi hazvigumire ipapo, tinogona kukumbira Google Mubatsiri kubva chero kupi, pasina chero rudzi rwezvirambidzo.
Nenzira imwecheteyo, Google Mifananidzo ichapa chengetedzo isingagumi mukugadzirisa kwekutanga kwemifananidzo nemavhidhiyo atinotora neGoogle Pixel yedu, saka, kunyangwe hazvo iyo yekuisa yeGoogle Pixel yekupinda iri mu32GB, zvinoita sekunge pasina matambudziko ekuchengetedza.
Magadzirirwo uye Mutengo
Vazivisa Google Pixel yeanoburitsa € 649 (isina muripo), inozosvika pakutenderera € 700 painorova Europe, sezvazvinowanzoitika muzvigadzirwa zveNorth America "dhizaini".
Chigadzirwa chiripo chekuchengetedza izvozvi kubva kuGoogle Play Store, uye chichaendeswa kuUnited States, Australia, Canada, Germany neUnited Kingdom, kumisika yese. hapana chinotarisirwa kusvika muna Gumiguru. Isu tinosiya zvakatemwa:
5 kana 5,5 inch AMOLED kuratidza
4GB yeLPDDR4 RAM
Pixel Imprint chigunwe chemunwe
3,450 mAh bhatiri reiyo 5,5 ″, uye 2770 mAh yeiyo 5 ″ vhezheni
12,3 MP yekumashure kamera ine 1,44 nm pixels uye f / 2.0 yakatarisana nekuvhura
32GB kana 128GB yekuchengetedza
MAKARALI USB 4.2
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Google Pixel, kubheja kweGoogle kuita yakakwana Android
Zvinondiyeuchidza zvakawanda zveimwe nharembozha asi ini handirangariri chaizvo ndeipi ...
Mhondi inouraya? Hahahahahaha saka horny xD
Apple Mepu inopa rutsigiro ruzere rwemigwagwa yeAmtrak muUnited States neCanada
Apple Inoburitsa iOS 10.1 Beta 2 YeVagadziri